Ejypta: Tantaram-pivarotana iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2019 3:41 GMT
Najanon'ny bilaogy iray aho androany ary voasarika avy hatrany tamin'ny fomba namaritan'i “Tak Hank” (Ar) ny fizotran'ny fiainana amin'ny alàlan'ny tantarana fivarotana kely ao amin'ny faritra misy azy.
Misy fivarotana sasany izay toa voaozona, manery ny tompony ho bankirompitra. Nahatsikaritra izany aho rehefa nijery trano fivarotana iray teo akaikin'ny tranoko izay tsy nitsahatra niova tompon-trano sy mpanofa, ary koa zavatra atao sy karazana entana namidy imbetsaka.
Tamin'ny fahazazako no fahatsiarovako voalohany ity fivarotana manokana ity raha mbola nentim-paharazana kely izany, izay ahafahanao mividy kilalao na vatomamy. Indray mandeha aho te-hividy sabatra plastika hampiasaina amin'ny andraikitro madinika amin'ny lalao ara-tantara izay nandraisako anjara tany am-pianarana (mbola tadidiko foana ny fehezanteny tokana lazaiko sy averimberina imbetsaka hoe: “Izany ve no valisoa azoko tamin'ny fanavotana anao tamin'ny fahafatesana? ! “).
Nankany amin'ilay mpivarotra efa antitra aho ary nangataka azy tamim-pahalalam-pomba mba hanome ahy ilay sabatra plastika; Gaga aho fa tena tezitra mafy izy. Nitabataba sy nanozona ny andro iainantsika izy, manenina ny zava-nitranga tamin'ny firenena sy ny vahoakany; raha misy zazalahy tonga mitady sabatra, ary misy zatovolahy iray manao heloka bevava mahatsiravina. avy eo nanomboka nivavaka izy ary nangataka tamin'Andriamanitra mba haka azy mba tsy hahitany izay zavatra mety hitranga amin'ny andro ho avy.
Tsy afaka namaly aho mazava ho azy, ary nalahelo niverina tany an-tranoko. Tsy maintsy hiteny aho hoe: “Izany ve no valisoa azoko tamin'ny fanavotana anao ry fahafatesana? ! “) tsy misy sabatra plastika. Tamin'izany fotoana izany dia nisy tantara heloka bevava nampatahotra ny rehetra, raha namono ny rafozam-baviny ny tovolahy iray, ary toa nampifandray io heloka bevava io sy ny firoborobon'ny heloka bevava niseho tao amin'ny vondrom-piarahamonina ilay mpivarotra, manery zaza tsy manan-tsiny iray hangataka sabatra plastika holalaovina.
Indraindray tiako ny mieritreritra fa ny ozona izay namely an'io fivarotana io dia nanomboka tamin'izay fotoana izay rehefa niantsoantso nanoloana ity zaza ity ilay mpivarotra, nandratra ny fony ary nanakana ny fifaliany tsy hilaza hoe: “Izany ve no valisoa azoko tamin'ny fanavotana anao ry fahafatesana? tamin'ny fomba araka ny tokony izy.
Ny fahatsiarovako manaraka an'ity fivarotana ity dia tamin'izy lasa fivarotana kasety. Nividy kasety antsoina hoe “El Farha” ho an'i Mohamed Mounir aho (tena kasety ratsy be ilay izy). Avy eo nanomboka ny dingana amin'ny fiovàovàna asam-barotra, tompon-trano, ary mpitazona azy haingana. Noho izany dia nanapa-kevitra hanaraka ny fironana amin'izao fotoana izao izany ary nanomboka nivarotra “nounours”, saingy tsy nahomby na dia teo aza ny fahombiazan'ny mpifaninana taminy. Safidy “azo antoka” kokoa ho an'ny fivarotana ny mivarotra kojakoja finday, karatra famahana finday .. sns. Fa na dia tsy nahomby aza izany andrana izany, nitondra azy tamin'ny fahaketrahana lehibe (fikatonana ela be). Lehilahy be volombava iray indray no nanomboka nivarotra ranomanitra, kasety ara-pivavahana, saingy tsy ampy ny ezaka ara-pinoana mba handresy ny zava-misy sy ny tsy fahombiazan'ilay tetikasa izay niafara tamin'ny fikatonana maharitra indray. Na izany aza, miala kely tsy lavitry ny toeram-pivarotana, nanomboka nivarotra ireo entana ireo izany ilay lehilahy be volombava, izay mahomby hatramin'izao, fivarotana misy latabatra kely eo amin'ny fidiran'ny trano.
Nikatona nandritra ny fotoana lavalava ilay fivarotana, nefa teo ny fikirizana hanandrana hivarotra kiraro! Rehefa nandalo teo aho roa volana lasa izay dia nahita lehilahy iray nametraka kiraro teo amin'ny fitaratra fivarotana. Mbola tsy nahomby indray ilay tetikasa vaovao alohan'ny nanombohan'izany ary tsy nisokatra mihitsy ilay fivarotana kiraro. Nanjavona teo amin'ny fitaratra ireo kiraro .. ary hatramin'izao dia mbola mikatona ilay fivarotana.